चिनियाँ सेनाले भन्यो: ‘आफ्नो सीमामा नबसे भारतलाई धुलो चटाइदिन्छौं’ – Online Nepal
June 17, 2020 312
काठमाडौं। केही दिनदेखि त’नाव उत्पन्न भएको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको भिड’न्तमा भारतले ठूलो क्षे.ति बेहोर्नु परेको छ । भारतीय सैनिक जबर’जस्त सीमा पार गर्न खोजेपछि भएको भिड’न्तमा २० भारतीय सेनाको मृ’त्यु भएको छ ।
लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको भि’डन्तमा एक कमाण्डरसहित तीनको घट’नास्थलमै मृ’त्यु भएको थियो भने घाइते अवस्थामा रहेका १७ जनाको उपचा’र नपाएर मृ’त्यु भएको छ । अन्य करिब २० जना बेप’त्ता छन् । उनीहरुको पनि मृ’त्यु भएको हुन सक्ने बताइएको छ । भि’ड’न्त भएको क्षेत्र चीनको नियन्त्र’णमा रहेको छ।
भारतीय सेनाले मंगलबार राति अबेर विज्ञप्ति निकालेरै आफ्नो क्षतिबारे स्वीकार गर्दै चीनतिर पनि हता.हती भएको दाबी गरेको छ । भारती सेनाले घाइ’ते १७ जनाको शून्य डिग्रीभन्दा कम तापक्रम र धेरै उचाई भएकोले मृ’त्यु भएको बताएको छ।
चिनियाँ सेनाले भारत जबर.जस्ती सीमा रेखा पार गरेपछि आफूहरुले कार.वाही गरेको बताएको छ । उसले भारती सेना फेरि अगाडि बढे धुलो च’टाइदिने चेता’वनी दिँदै आफ्नो सीमा रेखामा बस्न भनेको छ।
यसैबीच जनमुक्ति सेनाका पश्चिम कामाण्डका प्रवक्ता चाङ्ग शुईलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई आफ्ना सैनिकलाई रोक्न र विवा’द समाधानका लागि वार्ताको बाटो अपनाउन भनेका छन् । चिनियाँ संचारमाध्यमका अनुसार चाङ्गले भारतीय सैनिकले आफ्नो वाचा उल्लंघन गरेको छ र एकपटक फेरि नियन्त्र’ण रेखा पार गरेको छ र जानीबुझी चिनियाँ सेनालाई उक्साएर आ’क्रम’ण गरेकोले झ’डप भएको बताए ।
लद्दाखमा ४५ वर्ष पछि भारतलाई यति ठूलो क्षे’ति भएको हो। सन् १९७५ भएको यु’द्धमा भारले नराम्रोसँग हा’र खाएको थियो । गो’ली नचलाई भएको मु’क्का हा’नाहा’नमा भारतको यति ठूलो क्ष’ति हुनु भनेको भारतीय सैनिकको कमजोर उपस्थितिलाई देखाएको छ।
लद्दाखमा यति ठूलो क्ष’ति भएको भारत सरकारलाई १२ घण्टा पछि मात्रै जानकारी भएको थियो । सोमबार राति १२ बजे भएको घट’नाको मंगलबार दिउँसो १२ बजे मात्रै दिल्लीले जानकारी पायो।
Prevसुशान्तको नि’धनको खबर सुनेपछि उनका ५ वर्षका भान्जाले जब यसो भने …..
Nextआफ्ना २० जना सैनिक मा’रेपछि भारतले चीनलाई दियो यस्तो ध’म्कि !
एसईईको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि अपडेट
त्यस रात यस्तो भएको रहेछ !! जाजरकोट घटनाबाट बाचेका फर्केर नवराज बिकका साथी मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50214)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35887)